Ziziphi izinto ezifanelekileyo ezifanelekileyo kumantombazana agqibeleleyo: Udinga ukwazi oku, ukuze ungayonakalisi umfanekiso
Imfashini yabasetyhini Izixhobo
Abafazi abaphathekayo abanamafomu afanelekileyo kufuneka baqwalasele ngenyameko ukhetho lwezixhobo: iingubo "ezingalunganga" zingonakalisa umfanekiso ocingelweyo. Ungakhetha njani izinto ezilungileyo? Izibalo zikhuthaza ukuncamathela kwimithetho elula.
Izixhobo zamakhosikazi apheleleyo: iingcebiso ngeengcali
Iingcebiso zokukhetha ubunxibe beejaji ezipheleleyo
Umgaqo wegolide wokumodareyitha uhlala usebenza ngempumelelo: yingakho abanikazi bamanani kunye nosayizi kufuneka banike umhlobiso ogqithiseleyo kwizinto ezincedisayo. Iinkcukacha ezikhanyayo, izicelo ezinkulu, iimpapasho eziqhakazilekileyo, izixhobo ezintle, iimpahla ze-motley zingabonakalisa iipilisi ezingaphezulu. Ukuba uthanda imibala ecocekileyo, khetha udidi oluqhakazileyo, kodwa umbala omnye kunye nenkqantosi, eyilwayileyo.
I-Laconism: imfihlelo yomfanekiso wesitayela
Ubungakanani nemicimbi. Umncinci, i-headset efanelekileyo "inokulahleka" emfanekisweni, kwaye ingenakho ukuyihlobisa ngokufanelekileyo. Kodwa iinkcukacha ezinkulu, ezinkulu kakhulu zinokwenza ukuba isibalo sibe nzima. Ukuze ugweme oku, khetha i-jewelry kunye neengxowa zobukhulu obuphakathi, mhlawumbi - "ukuma". Ngoko uya kukhangela i-silhouette.
Izixhobo ezintle zeenkuthakazi
Imiqhekeza, iibhola kunye namabhande akufanele kube mkhulu-inani elithile lemida kunye nokugxininisa ngokukodwa kwinqeni kubhekiselele kwingingqi engxaki. Naka ingubo emincinci (uboya kunye nosilika, ikotoni okanye i-viscose), iinqwelo kunye neengqungquthela ezinokungakhathali (ukuvula intamo kunye ne-collarbones), musa ukugqithisa inqanawa ngeebhande ze-corset kunye neengcongolo ezivela kwizinto ezininzi.
Imiqhekeza kunye namabhande - ukuvakalisa okuphawulekayo
Ukukhetha imihlobiso yendawo yeefoto, khumbula: bayalatha ingqalelo kwingxenye ehambelana nomzimba. Nika iingubo ezinkulu, ukuba unobuso obungaphelele, ubuhlalu obukhulu okanye amabhonkce - kunye nesibhobho esichukumisayo kunye nezibonda ezininzi. Isisombululo esihle kakhulu - amacici amaninzi okanye amacangce kunye nama-pendants.
Imihlobiso emihle yeefowistas kunye nobukhulu
Isakhiwo seSixeko esikhulu: I-Tiffany HardWear Decoration
Indlela yokukhetha iiglasi ezifanelekileyo: Imithetho e-3 kulabo abafuna ukujonga umzobo!
Indlela yokukhetha ubucwebe ngombala we-manicure: iingcebiso ezi-3 ezibalulekileyo
I-Soie - "i-silk" yokuqokelela ubucwebe obukhulu ukusuka kwiDior
Isitayela sasePetersburg: "ukuthetha" iibhotile Iey Eye kunye neefayili
Ezili-10 ngeengubo zokugqoka
Imifuno yefestile, iHlabathi 2015-2016 - ifoto yeemfesane zamabhinqa ezifashisayo kunye neenqanda, iAntumn-Winter 2015-2016
Ama-cutlets aseTurkey ane-lemon
Iingxaki zendoda ezili-10 kunye nendlela umfazi alwa ngayo
Ukulenga ipeyari, kufuneka uyidle
Indlela yokuhlangabezana noMnyaka omtsha we-2018 Inja kwiimpawu ze-zodiac, ukwenzela ukuba ulonwabo
Imithetho yokutya ngexesha lokukhulelwa
Iintyatyambo ezingaqhelekanga kwiipotlo zendlu
Imilenze yamantombazana enhle kakhulu
Tacos nge lentils
Okroshka nge sprat kwiitamatato
8 Iingcebiso zokuphumelela kuMadoda
ULeonardo DiCaprio wamkela u-Oscar wokuqala, isithombe
Hlulela kwioli yeoli
I-mini pies kwintonga
Umphumo wokutshaya emzimbeni womntu
Indlela yokunyamekela kakuhle izinwele ezimhlophe: 4 imfihlo uKim Basinger
Indlela yokwenza i-pedicure kunye ne-manicure?